Ahoana ny fomba hisorohana ny aretina amin'ny Coronavirus
Novel Coronavirus 2019, nomen'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana anarana hoe 2019-NCOV. ny 12 Janoary 2020. Coronaviruses dia fianakaviana virosy marobe fantatra fa miteraka sery ary aretina matotra kokoa toa ny Middle East Respiratory Syndrome (MERS) ary ny syndrome respiratory respiratory mafy (SARS). Novel ...
Inona ny fitaovana sy ny famolavolana ny akanjo mitoka-monina ara-pahasalamana?
Ny fihanaky ny valanaretina dia nahatonga ny fitaovana fitsaboana tsy ampy, ary ny dokotera dia nampiasa palitao polypropylene. Manana akanjo mifanaraka aminy ve ireo akanjo mavo, fotsy, manga ary manga mainty, akanjo mitokana ary akanjo fandidiana? Mitovy ve izany? Etsy ambany aho manandrana miresaka ireo m ...
Areti-mifindra Covid-19: Aiza ireo toerana mafana manerantany amin'ny virus coronavirus?
Coronavirus dia manohy miely manerana an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny tranga 31 tapitrisa voamarina any amin'ny firenena 188 ary olona maty haingana dia haingana iray tapitrisa. Enim-bolana taorian'ny nanambaran'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) fa areti-mifindra io dia miakatra ny viriosy any amin'ny firenena maro ary misy ny hita ...
Ny fatiantoka Coronavirus dia very 'tsy mitovy amin'ny hatsiaka sy gripa'
Ny fahaverezan'ny fofona izay afaka miaraka amin'ny coronavirus dia tsy manam-paharoa ary tsy mitovy amin'ny zavatra niainan'ny olona tratry ny sery na gripa, hoy ny mpikaroka eropeana nandinika ny zavatra niainan'ireo marary. Rehefa manana fatiantoka fofona ireo marary Covid-19 dia mazàna tampoka sy mafy. Ary matetika izy ireo dia ...